Eudoxie Yao dia manambara ny tantaran'ny baolina ivoariana Didier Drogba. - FIVAVAHANA TELY
Eudoxie Yao dia manambara ny tantaran'ny baolina ivoariana Didier Drogba.
Ilay Afrikana Kim Kardashian dia vahiny ny fandaharana Peopl'Emik nandefa tao amin'ny La 3 niaraka tamin'ny tarika ho an'i Yves Aymard tamin'ny talata 23 jona 2020. Eudoxie Yao dia nifankahita tamin'i Christ Brown fa nanana fanambarana momba ny tantaran'ny baolina kitra ivoariana izany hoe Didier Drogba.
Jonathan Morrison dia naneho ny nenina taorian'ny fialany tamin'i Maria…
Ilay mpilalao sarimihetsika Johnny Depp dia mandà ny hitifitra ny vadin'izy mivady Amber Heard handany…
Ity angamba no fiaramanidina azo antoka indrindra hanidina mandritra ny coronavirus…
“Manana CAP ao amin'ny estetika aho. Izaho koa mpametaveta matihanina. Milamina tsara aho. Taona vitsivitsy lasa izay, rehefa tonga tany Côte d'Ivoire i Christ Brown sy i Rihana dia nifandray tamin'ny mpiasan'i Christ Brown aho mba hahafahany hamono azy. Nony tonga tany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny aho dia nanokatra varavarana ho ahy i Rihanna. Tao amin'ny lobby hotely ihany koa i Didier DROGBA. Mahagaga fa rehefa nahita an'i Kristy Brown aho dia toy ny nahita olona lamda, tahaka ny olon-drehetra. Saingy raha vao nahita an'i DROGBA aho, faly be satria saika kivy ny foko ”.
Amin'izao fotoana izao, ny tovovavy miaraka amin'ny curve malala-tanana, dia miresaka momba azy amin'ny tambajotra sosialy ihany.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://afriqueshowbiz.com/cote-divoire-eudoxie-ya-fait-une-re Revelation-sur-didier-drogba/
Ilay mpitoraka rap malaza Chris Brown niantso an'i Eudoxie Yao mba hamonoana
Raharaha Ernest Obama: "Amougou Belinga dia tsy maintsy henjehina ary tsy misy dikany," hoy i Dieudonné Essomba
Jonathan Morrison dia naneho ny nenina taorian'ny fialany tamin'i Maria Mobil: “Izaho…
Ilay mpilalao sarimihetsika Johnny Depp dia mandà ny hitifitra ny vadin'izy mivady Amber Heard ka nifanaraka tamin'ny 'Wino mandrakizay'…
Ity angamba no fiaramanidina azo antoka indrindra hanidina mandritra ny aretin'ny coronavirus - BGR
Amel Bent: voaheloka higadra efa-taona an-tranomaizina efatra taona i Patrick Antonelli